Eden Hazard oo lagu sawiray maaliyadda Real Madrid xilli uu dalxiis ku joogo wadanka Spain. – Gool FM
Abdirashid Mohamud May 31, 2019
(Madrid) 31 Maajo 2019. Weeraryahanka Chelsea Eden Hazard ayaa la rajeynayaa in isbuuca ugu horreeya bisha June ku biiro Real Madrid, balse iyadoon la gaarin waqtiga uu dhameystirayo heshiiska ayaa lagu sawiray maaliyadda kooxda boqortooyada.
Xiddiga reer Belgium wuxuu dalxiis ku joogaa Marbella, taageere nasiib leh oo Madrid ah ayaana fursad u helay inuu sawir la galo xiddiga kooxdiisa kusoo jeeda, walibana u dhiibay maaliyadda kooxda.
Iyadoo aan wali la xalin mustaqbalkiisa ayuu go’aansaday inuu aado magaalo xeebeedka koonfureed ee Spain, si kastaba Mirror Football ayaa baahisay sawirka uu taageeraha la galay xilli uu dalxiisayay.
Shabakadda Marca ayaa shaaca ka qaaday khamiistii in Real Madrid ay dhameystireyso heshiiska xiddigaan kadib marka uu soo dhameysto kulamada qaranka, warkaan ayaana imaanaya xilli Los Blancos aysan heshiis la gaarin Blues.
Ujeedada waxey tahay in xiddigaan reer Belgium lasoo bandhigo 11-ka ama 12-ka bisha June.
Goorma ayey Real Madrid si rasmi ah usoo bandhigi doontaa Eden Hazard? Waqti la isku raacay miyaa jira?